SOOMAALIDU YAY HABOON TAHAY INAY LA SAFATO QOWMIYADA ETHIOPIA? Maqaal kaan kaga bogo. - Ogaden24 | Ogaden24
Jul 18, 2020 - Comments off
Dad baddan oo waxaan arkaa soo qoraya “Halganka Oromada oo midho dhalaa,Soomalida guul ayuu u yahay”,qaar kale waxay ku doodayaan innay kooxaha Federalisamka u olaleeya lagu taagero dibad baxyada ay dalka dibadiisa ka waddan.
Haddaba intay-naan go’aamin tallada ugu habboon Soomalida,bal aan dhawr qoddob dul istaagno.
1. ARIN XUMO ABAAR KA DARAN.
Qowmiyadaha loolamaya ee Tigreega,Axmaarada iyo Oromada midkasta dadkooda wuu soo mideeyay;waxaa u yaala qorshe mustaqbal foga iyo midka dhawa.
Tusaale ahaan Tigreegu waxay rabbaan innay caddaadiska Abiye Ahmed iska dul qaadan,hadday awoodi waayaana innay Itoobiya ka go’aan.
Oromadu waxay rabtaa in tabashooyinkeda Magaallo sidda Addiss-Ababa,DiriDhaba,Moyaale iyo Adama looga jawaabo.
Oromadu waxay rabtaa in taarikhdii lagu faquuqayay iyo dhaqaalaha laga minjo xaabiyay loosoo celiyo,haddii ay intaas waydana Oromada waxaa u qorshaysan innay xuduud dalalka dariska helaan sidda Moyaale & Waddada Jaare;qorshahaas Soomalida iyagoo la kaa shanaya ayay rabbaan innay dalka ka go’aan.
“Mas iyo digaad daris ma noqon karaan”,Waa sheekada Axmaarada oo markasta rabta in Itoobiya wadda joogto islamarkaana Deegankasta ku dhex noolaadaan,Waxay rabbaan in luuqadooda iyo taarikhdooda guunka ah dalka lagu dhaqo.
Qowmiyad kasta iyaddoo labbadaas qorshe waddata islamarkaana dadkeedii mideysay ayay gaashan buuraysi kuwo kale la samaynayaan. Haddaba SOOMALIDA maxaa u diyaarsan, Intaynaan Oromo iyo Tigree taagerin?
Dhulka baddan ee Oromadu innaga haysato,Magaalloyinka muranku ku jiraan iyo dadkeenii soo barakacay ee aan illaa hadda dib loo dajinin soow ma habboona innaan kala arrinsano intaynaan halgankooda garab istaagin.
Oromada halgankoodu wuxuu kusoo ururayaa murtidii odhanaysay “Biyo ay hortood dhooqo tahay maxaad dabadooda mooday”.
Oromada iyo Soomalidu maanta waxay ku sifaysan yihiin odhaahda “Wadda jir duco umma baahna,tafaraaruqna habbaar umma baahna”.
Jabhadaha Oromada iyo midda Soomalida(ONLF) oo isbahaysi ku wadda jira ayaad la socoteen war murtiyeedkey Diridhaba kasoo saareen ururka OLF islmarkaana ay Soomalida ku duudsinayeen.
2. MA XASUUSTE ISMA XABAALO.
Waxaa kaloon macquul ahayn in dalka dibadiisa iyo guddaha Soomalida ku dhaqan xukuumada Abiye Ahmed banaan-baxyo u muujiyaan.
Cashir waxaa innoogu filan dhibatadii maamulkii hore soo foodsaartay markay is hortaageen Oromada xuquuqdeeda raadsanaysay.
Arrintaasna waxay dhalin kartaa in Soomalida xuduudaha iyo Oromada dhexdeeda ku nool caddaawad horleh loo qaado.
Innagoo ogsoon in Oromada aan xuduud iyo dhaqan waddaagno islamarkaana ay yihiin kuwa muddan ee lala safan karo;haddana su’aalaha kor ku xusan ayaa ka horeeya in jawaab loo helo.
Soomalida shaqo guri ayaa utaala ee marka hore aan wajahno;dadkeena guddaha,mucaradka,qurba joogta iyo Dawladdu sidda qowmiyadaha kale ha tashadaan.
Markaynu haddaf iyo himilo guud oo qaddiyada la xidhiidha meel isla dhigno ayaa habboon innaan gaashaan buuraysi raadino.
Maanta xiligii ay qowmiyad kale oo aynaan wadda haddal la galin inangu guuri lahayd maaha. Haddal waxaan kusoo koobay “danteena aan mudnaanta siino”.
ADIGU MAXAAD XAL U ARAGTAA? XILIGAN OROMO MA LA SAFAN KARNAA?